Ny Gulf Air sy ny Etihad Airways dia nanambara ny fifanarahana fiaraha-miasa
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Gulf Air sy ny Etihad Airways dia nanambara ny fifanarahana fiaraha-miasa
Ireo mpiara-miombon'antoka dia hiara-hiasa amin'ny fanatsarana ny asa iraisana amin'ny làlan'i Bahrain-Abu Dhabi, miaraka amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra isaky ny tobin'ny mpiara-miombon'antoka.
Tombontsoa azo avy amin'ny flyer matetika mihamitombo ho an'ny mpikambana Falconflyer sy Etihad Guest
Fandaharana fanatsarana sy fanatsarana ny fifandraisana amin'ny làlan'i Bahrain – Abu Dhabi
Mamolavola dia lavitra an'ny mpanjifa eo anelanelan'ny Bahrain sy Abu Dhabi
Gulf Air, mpitatitra nasionalin'ny fanjakan'i Bahrain, ary Etihad Airways, ny kaompaniam-pirenen'i Emirà Arabo Mitambatra, dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa ara-barotra stratejika (SCCA) hanamafisana ny fiaraha-miasan'izy ireo eo amin'i Bahrain sy Abu Dhabi ary mihoatra ny oniversite tsirairay avy.
Ny SCCA mivelatra, miankina amin'ny fahazoana alalana amin'ny governemanta sy ny lalàna mifehy, dia mamaritra hetsika manokana amin'ny fanamafisana sy fanitarana ny fiaraha-miasa ara-barotra, fananganana ny Memorandum of Understanding (MOU) ireo zotram-piaraha-miasa nosoniavina tamin'ny taona 2018.
Ny SCCA dia mihevitra ny fomba fiasa mifototra amin'ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny mpiara-miombon'antoka. Amin'ny dingana voalohany, amin'ny volana Jona 2021, ny habaky ny fifanarahana codeshare an'ny mpiara-miombon'antoka, nosoniavina voalohany tamin'ny taona 2019, dia hitarina be. Ny Gulf Air sy ny Etihad dia afaka manolotra toby 30 mitambatra any an-toeran-kafa ankoatry ny ivon-toeran'ny Bahrain sy Abu Dhabi, manerana ny Moyen Orient, Afrika, Eropa ary Azia.
Ireo mpiara-miombon'antoka dia hiara-hiasa amin'ny fanatsarana ny asa iraisana amin'ny làlan'i Bahrain-Abu Dhabi, miaraka amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra isaky ny foiben'ny mpiara-miombon'antoka. Ireo mpiara-miombon'antoka dia hanatsara ihany koa ny tolotra omena azy ireo ho an'ny mpanjifa ambaratonga voalohany an'ny Falconflyer sy ny Etihad Guest, ao anatin'izany ny fidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny eo amin'ny toeram-pivarotana sy ny fankatoavana amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganan'ny vahiny, na inona na inona zotram-piaramanidina miasa.
Ho fanampin'izany, ny mpiara-miasa dia hiara-hiasa amin'ny fanatsarana ny dian'ny mpanjifa ao Bahrain - Abu Dhabi, hahatonga azy io tsy hiraharaha kokoa, na inona na inona ny mpitantana, miaraka amin'ny politika sy vokatra mivoatra sy mirindra amin'ny faritra toy ny entana sy ny fanampiana.
Ny MOU 2018 dia nanolotra ihany koa ny fikarohana momba ny MRO, ny fanofanana ny mpanamory fiaramanidina sy ny mpiasa ary ny fahafaha-mitondra entana, izay hitsidihan'ny antoko ankehitriny manoloana ny fahafahan'ny tsena ankehitriny sy ny zavatra takian'ny orinasa.
Ny fifanarahana fiaraha-miasa ara-barotra stratejika dia nosoniavin'i Kapiteny Waleed AlAlawi, Lehiben'ny mpanatanteraka misahana ny Gulf Air ary Tony Douglas, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona, Etihad Aviation Group.
Hoy ny kapiteny AlAlawi: "Ny fifandraisanay amin'ny Etihad Airways dia natanjaka hatrany ary androany dia tonga amin'ny ambaratonga ambony kokoa amin'ny fiaraha-miasa izahay miaraka amina fotoana maro hafa eo amin'ny faravodilanitra eo amin'ireo mpitatitra nasionalin'ny fanjakan'i Bahrain sy ny Emira Arabo Mitambatra. Ity fifanarahana ity dia hanome hery antsika roa tonta hanolotra traikefa avo kokoa ho an'ireo mpandeha ary hanitatra ny safidiny. "
Tony Douglas dia nilaza hoe: “Ity fifanarahana ity dia manamafy ny tanjaky ny fiaraha-miasa mitohy eo amin'ireo orinasam-pitaterana roa tonta. Manantena ny hijerena ireo fomba pragmatika ahafahan'ireo mpitatitra roa miasa bebe kokoa eo anelanelan'ny renivohitra roa izahay, manatsara ny tombony sy ny traikefan'ny mpanjifa ho an'ireo mpandeha matetika ary manitatra hatrany ny tambajotran'ireo tambajotranay iraisana mihoatra ny foibenay. ”
Allegiant Air handefa sidina Key West tsy mijanona avy any Pittsburgh
Sandals Resorts dia manamora ny famerenana indray ny fitiavana